Philips inogadzira ayo Hue mwenje kutamba kune kurira kweSpotify | Gadget Nhau
Munguva pfupi yapfuura Philips yaita chiitiko chinonakidza kwazvo chatakakwanisa kuenda uye chatakatora kuti ndeapi mashoko anotevera pahardware nesoftware level nedanho reHue kweakasara egore ra2021.
Ino nguva tinomira pakubatana kunonakidza kwazvo, chokwadi, hatizive kuti mumwe munhu anga asina kuzvifunga sei zvisati zvaitika. Spotify nePhilips vanobatana kuti vaenzanise mimhanzi yako nemagetsi ako emagetsi uye vagadzire nharaunda dzine simba. Ehezve, ivo vakomana paSpotify havamire kutishamisa isu neakasiyana mashandisirwo e kwavo kumhanyisa mimhanzi sevhisi.
Zvese zvatakaona zvave zvisiri software, uye ndezvekuti chikamu cheHue chakazivisa mwenje mutsva wechiedza cheterevhizheni, pamwe nekuvandudzwa kudiki kwemamwe emabhalu ayo ave kushanda zvakanyanya uye kupenya. Chero ani ane imba izere naPhilips Hue sezvazviri nyaya yangu, achaziva kuti aya mabhuru haana kuzivikanwa chaizvo nemagetsi avo emagetsi.
Iye zvino tine nhau dzemimhanzi kune avo vashandisi vePhilips Hue vanonakidzwa nemagetsi emagetsi ane huwandu hwemavara kana akasiyana akasiyana maRGB. Kana iwe ukaenda kune chikamu chevaraidzo cheiyo Hue application yemafoni nhare, iwe unozogona kuenderana system yako neSpotify uye inokupa iwe mukana wekufananidza mimhanzi yako nekuvhenekera kwako, uchaita mwenje kutamba chaizvo.
Iyi ficha yakatoburitswa kare, iwe unofanirwa kugadzirisa yako Philips Hue app uye uteedzere matanho ataurwa pamusoro. Tora mukana uno kurangarira kuti Philips Hue ane metadata yenziyo, saka kuona mune dzidziso hakuzotora chero kunonoka nemumhanzi. Zvichakadaro, iwe unogona kuenderera kubheta pane zvekare mwenje. Rangarira izvo muActualidad Gadget Tine akawanda ma tutorials kuYouTube maitiro ekuunganidza ako smart magetsi emidziyo kumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » Philips inogadzira ayo Hue mwenje kutamba kune kurira kweSpotify